Eoropa San marino
Adiresy: Cesta fortezza, San Marino, Contrada della Pieve (Foibe Old Town)
Phone: +378 0549 991999
Entry: 3 EUR, ankizy 2 euros
Fotoam- bavaka : ny mozika dia miasa hatramin'ny 15 jona hatramin'ny 15 septambra - 10.00-12.30, 14.00-18.00
Iray amin'ireo firenena te-hitsidika an'i Eoropa ny San Marino . Io fanjakana madinika io dia mitsidika isan-taona amin'ny mpizaha tany maherin'ny telo tapitrisa. Ary manintona eto ny sarin'ny firenena, izay ahafahanao miditra ao amin'ny Moyen Âge. Betsaka ny trano fialofana, trano fonenana ary fiarovana azo tsinontsinoavina hita any San Marino. Ambonin'izany, ny mponina ao amin'ny firenena dia miaina tanàna amorom-patana kely, izay voatahiry tanteraka ( Domagnano , Kyzeanuova , Faetano , sns.).
Ny renivohitry ny fanjakana dia tranon'ny trano sy trano tranainy, izay manakatra ny havoanan'i Monte Titano . Ao an-drenivohitra ihany koa ireo tranom-bakoka marobe sy ny iray amin'izy ireo - ny Tranombakoka fitaovam-piadiana fahiny.
Fiarovana hery tsy miankina
Ny San Marino dia mifototra amin'ny finoana kristianina. Ary mazava ho azy, ny fanjakana kristianina mahaleo tena tany afovoan'i Italie dia tsy noraisina tany Italia fahiny. Noho izany, tsy mahagaga raha ny renivohitry ny fanjakana sy ny manodidina ny Tendrombohitra Titano, izay misy azy, dia mibaribary amin'ny fiarovana mafy, vavahady fiarovana sy fiarovana. San Marino tsy maintsy hiaro tena amin'ny fanafihan'ny mpifanolo-bodirindrina. Ary, raha jerena ny toeran'ny repoblika mahaleotena ankehitriny, dia mazava fa ny fahombiazan'ny fiarovana.
Ary mora ny mamintina fa mahatakatra fitaovam-piadiana ny mponin'ity firenena ity ary efa nahatakatra hatrany. Izany no mahatonga ny Museum of Weapons ao San Marino, izay miorina ao amin'ny lapa miorina ao Chest, dia mahaliana.
Famoahana ny tranombakoka
Ny tranom-bakoka dia nampiseho fitaovana isan-karazany ho an'ny ady, nanomboka tamin'ny ady tamin'ny Moyen Âge ary namarana ny fitaovam-piadiana tamin'ny taonjato faha-20. Ny fampiratiana rehetra dia nividy ny fanjakana ao San Marino nandritra ny 16 taona ary aseho amin'ny efitra lehibe efatra. Mba hametrahana sary ankapobeny momba ny fampiroboroboana ny zava-mitranga, ny fitaovam-piadiana rehetra dia aseho amin'ny lamina mitranga.
Ny tahirin-tsarimihetsika dia maherin'ny 1.500 kopy ho an'ny fotoana lava, manomboka amin'ny Moyen Âge. Ny fampiratiana ny tranombakoka dia aseho amin'ny tranga glasy, izay ahafahan'ny mpitsidika mahita azy ireo avy amin'ny andaniny rehetra.
Ny lalan'ny fitsangatsanganana dia mandalo efitrano efatra ary mamela anao handinika ny fampandrosoana ny orinasa fitaovam-piadiana. Ny tranombakoka dia mampiseho fampirantiana manana lanjany ara-tantara lehibe.
Room 1 - fitaovam-piadiana
Misy karazana fitaovam-piadiana maro samihafa atolotra ao amin'ny efitrano voalohany. Misy andiam-pitaovam-piadiana mahery vaika tamin'ny taonjato faha-15, ary matevina sy kanto, natao ho paradisa, halberds tamin'ny taonjato faha-17.
Ny mahaliana manokana amin'ny fiadiana rehetra atolotra eto dia ny famaky ireo famaky miaraka amin'ny lelany maranitra maranitra ary ny halatra ady amin'ny endrika maitso. Mety ho hita ihany koa fa ny sabora sy ny halibolam-pandaminana dia noraisina tamin'ny endriny kokoa. Ary midika izany fa very ny lanjany mahatsiravina izy ireo, ary nomena fiarovan-tena ny safidy.
Ny halatra, ny familiana ary ny famaky dia naseho tany Italie hatramin'ny fiandohan'ny taonjato faha-17. Ao amin'ny varavarankely iray dia ahitanao fiadiana fiarovana sy sabatra amin'ny vanim-potoanan'ny meda.
Hall 2 - Fiarovana
Ao amin'ny efitrano faharoa ao amin'ny Museum of Weapons ao San Marino dia ahitanao ny fiadiana rehetra, izay noforonin'ny tale avy any Angletera, Italia sy Alemana tamin'ny taonjato 15-17. Eto dia aseho ny fahaiza-manaon'ny tompo vy.
Ny fampiratiana tsy fahita firy dia fiarovan-tratra ho an'ny zaza iray, vita amin'ny vy sy varahina ary voasokitra. Noforonina tao amin'ny Royal Military Factory any Angletera izy tamin'ny taonjato faha-16.
Hall 3 - fampiroboroboana fitaovam-piadiana
Ny fitaovam-piadiana an'ity seza ity dia mampiseho ny zava-bitan'ny teknôlôjian'ny taonjato samihafa, ampiasan'ny mpitaingin-tsoavaly. Tamin'ny taonjato faha-15 dia fuse ho an'ny arquebus, ary efa tamin'ny taonjato faha-18 dia fitaovam-piadiana mahery vaika no novokarina.
Anatin'ireo fampisehoana tsy fahita firy dia afaka mahita basy tokana monja, izay noforonina tany Atsimo-Bavaria, tao amin'ny orinasa, manodidina ny 1720. Mahaliana koa ny mahita andian-tsambokely madinika izay miloko marevaka amin'ny sary sokitra volamena sy sary sokitra.
Ao an-dalantsara dia misy fiompiana tranainy iray tamin'ny taompolo faha-17 tamin'ny taon-dasa Michele Lorenzoni.
Hall 4 - fitaovam-piadiana sy fitaovam-piadiana
Ny revolisiona indostrialy tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-18 dia azo tsapain-tànana amin'ny afomanga ao amin'ny efitrano manaraka. Ny mahaliana manokana dia ny fiadiana fiarovana voalohany, izay antsoina hoe fitondram-basy.
Anisan'ireo fampirantiana mifandraika amin'ny fitaovam-piarovana, afaka mahita ny solontenan'ny fitaovam-piadiana sy fitaovana noforonina tamin'ny fotoana samihafa, hatramin'ny nanjakan'i Napoleon ka hatramin'ny rindrina maoderina.
Ny mpankafy fitaovam-piadiana dia hahita fampiratiana maro mahaliana ao amin'ity efitrano ity, ary koa ao amin'ny tranombakoka manontolo.
Ny tranom-bakoka dia miorina ao amin'ny Foibe Old San Marino, toerana izay ahafahana mampifanaraka ireo fiaramanidina ara-bakiteny amin'ny antsasak'adiny. Tian'ireo mpizaha tany mandeha an-tongotra, fa afaka mitondra fiarakaretsaka na fiara voavoatra. Manoro hevitra izahay aorian'ny fitsangatsanganana ihany koa mba handeha amin'ny kianja malalaka ary mitsidika ny sasantsasany amin'ireo mozika tsy mahazatra - tranom-bakoka mahaliana , tranombakolan'ny vampires ary tranom-bakoka .
Ny synagoga taloha
Tanànan'i Ayia Napa
Pantogam ho an'ny ankizy
Zavatra mahaliana momba an'i Luxembourg
Crème emolium - ny endriky ny zava-mahadomelina
Lamina matevina eo afovoan'ny trano
Iza amin'ireto paty manaraka ireto no tsara indrindra?
Tsy sakafo karaobera
Fitaovana fampakaram-bady turquoise
Black currant amin'ny maha-bevohoka
Fanamboaran-trano anatiny ao amin'ny trano iray
Mofo papango - tsara sy ratsy
Na azo atao ve ny manao vehivavy na bevohoka?
Akora inona no safidy?
Fitiavana eo amin'ny vehivavy
100% ny herisetra: ireo mpividy indrindra amin'ireo mpanamory amerikana!
Fanamboarana lakozia kely